Ihe 5 mere ị ga-eji gaa Mali ịchọ njem | Akụkọ Njem
Foto | nlegharị anya nkemoschee
TMgbe ọtụtụ afọ nke ọgba aghara na enweghị nkwarụ, njem nlegharị anya na-alaghachi Mali ọzọ iji nọrọ onwe ya dị ka otu n'ime ebe kachasị mma na West Africa. Agbanyeghị maka ọtụtụ ndị njem, Sub-Saharan Africa belatara njem na Tanzania na Kenya, enwere ọtụtụ ihe kpatara Mali ji bụrụ otu ebe kachasị mma ileta na kọntinent ahụ. Ọ bụ ya mere, n'okpuru, anyị nyere gị ihe ise kpatara ị ga - eji gaa Mali maka njem.
4 Obodo Dogon
Foto | Flickr site n'aka Göran Höglund
Isi obodo Mali bụ ọnụ ụzọ ámá mba ahụ, ọnụ ụzọ ọdịbendị na-agbaze nke mejupụtara otu n'ime agbụrụ ndị nwere agbụrụ dị iche iche n'Africa. Ndị Fulani, Senufos, Dogons, Tuaregs ma ọ bụ Bambaras bụ ụfọdụ agbụrụ ndị na-ebikọ na Mali, nke ọ bụla nwere ihe dị iche iche gbasara uwe, ụzọ ndụ ma ọ bụ nkwenkwe okpukpe.
Ahia Bamako bu ezigbo ebe iji mata ha ma mata ndi obodo Malian. Ọ bụkwa ebe dị mma iji gaa leta obodo ahụ ma zụta ụfọdụ ihe ncheta metụtara ọrụ aka Malian na omenaala ha. Ọ dị na Bamako Craft Market ebe ị nwere ike ịchọta ụfọdụ masks kachasị atọ ụtọ iji wepụ dị ka ihe ncheta.
Nleta ngwa ngwa na National Museum of Mali ga-eme ka anyị nwee ike ịkọ akụkọ ihe mere eme site na afọ: site n'oge gara aga ruo oge a. N'ebe a, a na-egosi anyị ọtụtụ ngosipụta na-adịgide adịgide na nke nwa oge na textiles, ihe osise na ihe nkpuchi nke agbụrụ dị iche iche nke mba ahụ.
N'akuku National Museum bụ Mali National Park nke mejupụtara hekta 17 wee jupụta na ọtụtụ puku osisi, gụnyere ụfọdụ osisi. Emepụtara ya maka oge ezumike nke ndị bi na Bamako na ndị ọbịa ha na ụlọ ebe a raara nye ụmụaka ka ha nwee ike igwu egwu, ụzọ igwe kwụ otu ebe na mgbatị ahụ.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na nnweta enweghị nnwere onwe, ọ na-enweta nleta 500 kwa ụbọchị, nke na-egosi mmeri ya. Ọtụtụ ezinụlọ na-enubata ebe ahụ ka ha nọọ ụbọchị ahụ ma nwee pịịlị ahịhịa ma ọ bụ igwu egwuregwu.
Na-esote Bamako National Park bụ Zoo, nke mepere emepe afọ ole na ole gara aga mgbe mweghachi na ọrụ ndozi dị.
N’akụkụ ebe mmiri na-ezo na Sudan na Sahara bụ Djenné, 500 kilomita site na Timbuktu site n’akụkụ osimiri, nke ya na ya jikọtara azụmahịa.
E wuru obodo a na-agbaso ụdị ụkpụrụ ụlọ Sudan. A na-ete ụlọ adobe adobe cubes ma chọọ ya mma site na pilasters, ogwe aka ma ọ bụ parapets. Elekere iri na otu nke Djenné gbasaa na mpaghara hekta iri abụọ nwere mgbidi.
Okporo ámá ndị dị warara ma dị warara na-eduga n'ámá abụọ dị mkpa na otu n'ime ha (Market Market) bụ nnukwu ụlọ alakụba, nke guzo ogologo na mbara ala.. Ọ bụ nnukwu ụlọ akwụkwọ adobe n'ụwa na ọmarịcha ụlọ nsọ Sudan-dị na West Africa. Ikekwe ọ bụ ya mere o ji bụrụ akụkụ nke UNESCO World Heritage List.
Needslọ dị otú a chọrọ ka a gbanwee ya oge niile, nke mere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nile bi na Djenné ga-agbakọ aka kwa afọ iji weghachite akwa nke adobe furu efu n’oge mmiri ozuzo.
Thebọchị kachasị mma iji gaa Djenné ma gaa n'okporo ámá ya bụ Mọnde ka a na-enwe nnukwu ahịa, n'ihu ụlọ alakụba, nke na-adọta ndị Mali si n'akụkụ nile nke mba ahụ yi uwe ha. Ihe kwesiri ile anya.
Ogologo awa abụọ site na Djenné anyị hụrụ Mopti, obodo ọzọ dị mkpa na nleta na Mali. Dabere na ikpere Osimiri Niger na aha otutu nke Venice nke Africa, ọ bụ ebe dị mma iji nọgide na-achọpụta ụlọ ọrụ Sudan kachasị mma nke obodo a na nnukwu ụlọ alakụba mara mma.
N'iji eziokwu ahụ bụ na ọnụ ọgụgụ ndị bi na ndagwurugwu Niger, onye njem ahụ nwere ike ịnụ ụtọ ịnyagharị osimiri na-adịghị nwayọ n'ime otu cayucos ndị dị ebe ahụ. N'ihi ya a na-etu ya Venice nke Africa.
Otu o sila dị, a na-ekwu na ihe kachasị amasị Mopti bụ ngwakọta ọdịbendị dị na ahịa ya. Ọ bụ ezie na n'ụtụtụ nke ụbọchị, enweghị ọtụtụ mmadụ, obere pinazas (ụgbọ mmiri osisi) ebu ngwaahịa iji ree na-abịa.
Foto | Ọdụ nke iju
Ihe dị ka otu awa na ọkara iche Mopti na mba Dogon, ebe otu agbụrụ kachasị mma na Mali bi. Dogon bịara ebe a na njedebe nke narị afọ nke iri na anọ mgbe alaeze Mali dara mgbe ọ na-agbapụ mgbasa nke Islam, ebe ọ bụ na ha bụ anụmanụ.
N'ebe a, ha chọtara ebe ha ga-anọ wee chekwaa omenaala ha n'ụlọ adobe n'ime obere obodo.
Obodo Dogon bu onye ama ama nke njem ubochi ato nke enwere ike ime ebe a na ukwu nke Bandiágara kpatara. N'oge njem ahụ ị nwere ike ịtụgharị uche n'ụzọ ndụ Dogon na baobab mara mma, osisi kachasị mma nke osisi Africa.
Foto | Afribuku
Ọkara nke etiti etiti savannah Africa na ọzara Sahara, na mpaghara a na-akpọ Sahel, bụ Timbuktu, nke bụ isi obodo ndị Tuareg kemgbe ọtụtụ afọ.
Afọ ise gara aga, Timbuktu nwere ọdachi ịdaba n'aka ndị jihadists bụ ndị bibiri obodo ahụ ma mee ka ndị bi na ya gbapụ. Nwayọọ nwayọọ mmiri ahụ laghachiri n'ụzọ ha wee nwee udo laghachi na mgbago ugwu nke Mali maka ọdịmma nke ndị bi na ndị njem, ndị nwere ike iju ha anya ọzọ site na adobe na apịtị mara mma nke Timbuktu, otu n'ime ihe kachasị mma n'ụwa.
Fọdụ ebe kachasị akara ngosi ileta ebe a bụ ụlọ alakụba Djingareyber ma ọ bụ ụlọ alakụba Sidi Yahya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Ihe 5 mere ị ga-eji gaa Mali ịchọ njem